KG တန်းပဲ ရှိသေးတယ်၊ သင်္ချာတော်ချက်က လန်ထွက်နေတာ…ပဲ – ရှအေလငျး
KG တန်းပဲ ရှိသေးတယ်၊ သင်္ချာတော်ချက်က လန်ထွက်နေတာ…ပဲ
ယခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ရုပ်သံလေးကတော့ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ သင်္ချာတော်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်သံဖိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်….
အဆိုပါကလေးငယ်ဟာ KG တန်းကလေးဖြစ်ပြီး ဘေးကလူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ မေးမြန်းမှုတွေကို လက်တန်းဖြေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်….
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ခုလို ထူးချွန်တဲ့ကလေးငယ်တွေ ပေါက်ထွက်လာတာ ဝမ်းသာစရာပါ…
ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး စကားမပီကလာ ပီကလာနဲ့ ဖြေနေတဲ့ကလေးရဲ့ ရုပ်သံဖိုင်ဟာလူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပြီး…
ကလေးငယ်ကို အားပေးချစ်ခင်သူ အများအပြားရှိနေခဲ့ပါတယ်….
ကလေးတစ်ယောက်ထူးချွန်ထက်မြတ်ဖို့ဆိုတာ မိဘတွေရဲ့ သွန်သင်မှု… ဂရုစိုက်အချိန်ပေးမှုတွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်…..
ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးမှာလည်း ခုလိုကလေးငယ်ရှိတယ်ဆိုရင်… အချိန်ပေးပြီးပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝ တည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်……
Video Source : Yangon Ging
ယခုတဈခါတငျဆကျပေးမယျ့ ရုပျသံလေးကတော့ အသကျငယျငယျနဲ့ သခငြ်ျာတျောတဲ့ ကလေးတဈယောကျရဲ့ရုပျသံဖိုငျပဲ ဖွဈပါတယျ….
အဆိုပါကလေးငယျဟာ KG တနျးကလေးဖွဈပွီး ဘေးကလူကွီးတဈယောကျရဲ့ မေးမွနျးမှုတှကေို လကျတနျးဖွနေိုငျတာပဲဖွဈပါတယျ….
ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံမှာ ခုလို ထူးခြှနျတဲ့ကလေးငယျတှေ ပေါကျထှကျလာတာ ဝမျးသာစရာပါ…
ခဈြဖို့ကောငျးပွီး စကားမပီကလာ ပီကလာနဲ့ ဖွနေတေဲ့ကလေးရဲ့ ရုပျသံဖိုငျဟာလူမှုကှနျရကျမှာ ပြံ့နှံ့လကျြရှိပွီး…
ကလေးငယျကို အားပေးခဈြခငျသူ အမြားအပွားရှိနခေဲ့ပါတယျ….
ကလေးတဈယောကျထူးခြှနျထကျမွတျဖို့ဆိုတာ မိဘတှရေဲ့ သှနျသငျမှု… ဂရုစိုကျအခြိနျပေးမှုတှနေဲ့လညျးသကျဆိုငျပါတယျ…..
ခဈြတဲ့ပရိသတျကွီးမှာလညျး ခုလိုကလေးငယျရှိတယျဆိုရငျ… အခြိနျပေးပွီးပြျောရှငျတဲ့မိသားစုဘဝ တညျဆောကျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးပါတယျနျော……
ဝင်းနဲ့ဇော် အတွက် ထိုင်းမီဒီယာတွေမှာ လိုက်ပြီး တောင်းဆိုနေကြတဲ့ မြန်မာအနုပညာရှင်များ
ကလေး မထိန်းချင်လို့ နို့ဘူး ထဲ အိပ်ဆေး ခပ်တဲ့ အိပ်ဖော်လုပ်ရပ်ကြောင့် အံ့အားသင့်ခဲ့ရတဲ့ မိဘတွေ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ မူလတန်းသင်ရိုးမှာပါဝင်လာခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အောင်လအန်ဆန်း နဲ့ ဖိုးသော် တို့ ရဲ့ ပွဲစဉ်တွေကို တိုက်ရိုက်ပြသမယ့် အချိန်
မွေးရပ်မြေက အိမ်အိုလေးကို ရောက်ရင်း ဆင်းရဲတွင်းနက်ခဲ့တဲ့ တချိန်ကအတိတ်တွေကို...
အရက်ပြန်ကို အသုံးချနိုင်သော အံ့သြဖွယ်ရာ နည်းလမ်းများ
ဆင်းရဲတဲ့ ဘဝအမှန်ကို…. ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေကို …...
“မွေးနေ့မှာ ဘုရားသွားကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ အောင်ရဲလင်း”